ငွေလမင်း: မှန်ရာကို သစ္စာဆိုပါမည်..။
Posted by ငွေလမင်း at 11:57 PM
ပြောင်းလဲချိတ်ပြီး ထပ်တူ ကြေကွဲ။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါဗျာ...
ဘကျောက်ရေ...အမျှ အမျှ အမျှ
ပြောင်းချိတ်ပြီးပါပြီ ကျောက် အတွက်လည်း အထူးဝမ်းနဲ ရပါတယ်ဗျာ
ဟ ငါ့ဆီမှာ အော်တို ပြောင်းပြီး ဖြစ်နေပါရောလား.. ဘကျောက်နတ်မင်းလက်ချက်များလားမသိ......
ကိုကြီးကျောက်လည်း ကောင်းရာ မွန်ရာ ဘုံဘဝကို ရောက်မှာပါ။
စင်္ကာပူ ထီပေါက်ရင် စင်္ကာပူက ဘလော့ဂါတွေကိုပဲ စုပြီး အလှူလုပ်မယ် ဆိုတော့ တခြားနိုင်ငံက ဘလော့ဂါတွေတော့ မပါဘူးပေါ့ . . . . ?????
ငါ့ဆီလည်း အော်၇ှည်ပြောင်းပြီးသားပဲ ငွေလမင်းရ..။